Payroll Services - Myanmar Citizens Bank (MCB)
MCB သည် ATM ကဒ်ဖြင့် လစာပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို လူကြီးမင်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအား အချိန်မှန်တိကျစွာဖြင့် လစာပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
လစာပေးခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေရန်နှင့် ငွေကြေးစုဆောင်းမှုရှိစေခြင်း
တိကျ မှန်ကန် လုံခြုံစွာ လစာထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
လစာစာရင်းများအား MCB ဘဏ်မှပေးပို့သော excel file format ဖြင့် လစာ စာရင်းများ အား စစ်ဆေးပြီး carddept@mcb.com.mm သို့ excel file နှင့် pdf file နှစ်ခုဖြင့် လစာပေးမည့်နေ့ မတိုင်မှီ နှစ်ရက်(အလုပ်ဖွင့်ရက် )ကြိုပေးပို့ရပါ မည်။
နယ်ဘဏ်ခွဲမှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ကဒ်အကောင့် များအား လစာစာရင်းငွေသွင်းပါက ၅၀၀ကျပ် ပေးသွင်းရမည်။
Company letter head ဖြင့် ဝန်ထမ်းများ၏လစာစာရင်းများ အတွက် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်သောသူ နှစ်ဦးအား တာဝန်ပေးကြောင်းအကြောင်းကြားစာတစ်စောင်နှင့် ဆက်သွယ်ရန် E mail အားပေးပို့ရပါမည်။
Company ၏ စာရင်းဖွင့်လှစ်မည့် ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များ Schedule နှင့် opening form ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်ရေး အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံရပါမည်။ Schedule ပါ ဝန်ထမ်းများ စာရင်း ဖွင့်ခွင့်ပြုပါရန် letter head တစ်စောင်ပေးရပါမည်။
ကနဦးစာရင်းသွင်းငွေအဖြစ် အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်နိုင်သည်။စာရင်းဖွင့် ပြီးပါက excel file format အား တောင်းယူနိုင်ပါသည်။
Card 3,000 MMK
Salary charges per transaction 100 MK
MCB provides payroll service that allows using ATM cards and promises you managing the salaries of employees accurately and on timely manner.
1.The company has to sendaconfirmation letter of assigning two responsible people to contact and an email address in company letterhead in crediting salaries to employees’ accounts at the bank.
2.The company needs to send the opening forms andaschedule of individual employees’ facts needed for opening accounts along with the confirmation letters stating those facts are accurate. The company also has to send the request letter in letterhead for opening the accounts for employees in the list.
3.Account can be opened with the initial deposit of MMK 10,000 and Excel File format can be asked for after opening process.